देशका धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षा, कुन प्रदेशमा कति वर्षा ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार देशका धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षा, कुन प्रदेशमा कति वर्षा ?
वाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकी, प्रदेश-१ र प्रदेश-२ का धेरै ठाउँमा अति ठूलो वर्षा भएको छ। अहिले पनि देशका धेरै ठाउँमा झरी परिरहेको छ । लगातारको झरीले देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ ।
यस्तै, रुपन्देहीमा एक सय ८६ मिलिमिटर, भैरहवामा २ सय ५८ मिलिमिटर र कपिलवस्तुको वाणगङ्गामा ३ सय ११ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । वाणगंगा आसपासमा पनि बितेको २४ घण्टामा अति ठूलो वर्षा भएको मौसमविद् मिनकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बर्दियामा पनि १ सय ६ मिलिमिटर पानी परेको छ।
प्रदेश-२ को धेरैजसो क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भएको छ । गएको चौबीस घण्टामा बाराको निजगढमा गएको एक घण्टामा नै ४८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । यस्तै धनुषाको जनकपुर विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा पनि अति ठूलो वर्षा भएको छ ।
एक घण्टाको अवधिमा त्यहाँ पनि ४६, ४७ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । गएको २४ घण्टामा भने धनुषमा एक सय एक मिलिमिटर पानी परेको छ । यस्तै, पर्सा, सिरहा र सप्तरीमा पनि ठूलो वर्षा भएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरैजसो ठाउँमा आज राति र भोलि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् मिनकुमार अर्यालले बताउनुभयो । भोलिदेखि देशका मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा भने बिस्तारै पानी पर्न कम हुने छ । मौसमविद्का अनुसार आज पनि लुम्बिनी, गण्डकी, वाग्मती, प्रदेश-१ र प्रदेश-२ का धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना छ ।
Previous articleसंसारकै धेरै जुम्ल्याहा जन्मिने रहस्यमय गाउँ
Next articleउडिरहेको विमानभित्र महिलाले चुरोट सल्काएर अन्य यात्रुको मुखमा धुवा फालेपछि …
चर्चित हास्य कलाकार काउली बुढि काे अावाजमा छम्म छम्म बाेलकाे गित सार्वजनिक